भागरथी घटनामा उनकै भाई संलग्न ! बयानमा भन्छन् ‘दिदी चाउचाउ खाँ दै आइन्, पछाडीवाट ध क्का दिएर ल डाएँ’ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भागरथी घटनामा उनकै भाई संलग्न ! बयानमा भन्छन् ‘दिदी चाउचाउ खाँ दै आइन्, पछाडीवाट ध क्का दिएर ल डाएँ’
काठमाडौ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको ह’ त्या घटनामा पक्राउ परेका किशोर उनकै भाई नाता पर्ने ब्यक्ति भएको खुलेको छ । उनले फुपुको बदला लिन भागीरथी माथी घटना गराएको प्रहरी सामु स्वीकार गरेका छन् । उनले भागरथी आउने बाटोमा डेढ घण्टा देखि कुरेर बसेको पनि बयानमा बताएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
उनको ब ला/त्का र पछि ह’ त्या भएको प्रहरी निष्कर्षपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनकै भाई पर्ने दिनेश भट्ट घटनामा संलग्न भएको खुलेको हो । उनले घटनाको दिन डेढघण्टा पहिल्यै भागरथीलाई बाटोमा कुरेर बसेको पनि बताएका छन् ।
भागरथी स्कूलवाट निस्कनु डेढ घण्टा अघि नै उनी स्कूलवाट निस्कीएका थिए । भागरथी पढ्ने स्कूलमै पढ्ने उनी कतिबेला भागरथी घर जाने आउने गर्छिन भन्ने सबैकुरा थाहा थियो ।
भागरथी कक्षा १२ मा पढ्थिन् भने दिनेश कक्षा ११ मा । दिनेशको विद्यालय छुट्टी समय ३ बजेर १५ मिनेटमा हुन्थ्यो भने भागरथीको २ बजेर ३० मिनेटमा ।
तर माघ २१ गते दिनेश विद्यालयवाट छिटै निस्केका थिए । उनी घटना गराउने योजनाकै कारण छिटो विद्यालयवाट निस्कीएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । तर ह ‘त्या स्वीकार गरेका दिनेशले आफूले ब ला/त्का र नगरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
पक्राउपछि दिनेशले प्रहरीसंगको वयानमा भनेका छन्,,“म बाटोमा पहिल्यै बसेको थिएँ । भागरथी दिदी चाउचाउ खाँ दै आउँदै थिइन् । सुरुमा मैले उनको किताब फा लेँ । त्यसपछि उनलाई पनि पछाडिबाट ध क्का दिएँ । उनी ल डेर बे हो स भइन् अनि घाँ टी थि/चे र मा/रेँ ।” उनले भागरथीलाई ल डा एर बे/हो स बनाएपछि ब ला/त्का र गर्न खोजेको भए पनि नगरेको उनको वयान छ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।